China Tambanudza Bhora Kutakura vagadziri uye vanotengesa | LGGB
Kutambanudza bhora mabheyari anoburitswa senge imwechete nhungamiro kana kaviri nzira yekukanda bhora mabheyaringi. Izvo zvakagadzirirwa kugadzirisa axial mitoro chete uye haifanire kuiswa kune chero radial mutoro.
Kutambanudza bhora mabheyari akapatsanurwa, shaft washer, dzimba pesher (s), bhora uye keji gungano (s) inogona kuiswa zvakasiyana. Shaft washers ine pasi inobereka kuti ikwanise kupindirana kukwane. Iyo bore yeiyo imba washer inoshandurwa uye inogara yakakura kudarika shaft washer inobereka.
Yakatungamira nzira yekukanda bhora mabheyari: ane maviri mawasher ane raceways uye mabhora anotungamirwa ba keji. Washer ine zvigaro zvakagadzika, uye ndosaka vachifanira kutsigirwa kuitira kuti mabhora ese atakure zvakaenzana. Mabheyari anotakura axial mutoro chete munzira imwechete. Ivo havakwanise kutakura radial mauto.
Yakapetwa nongedzo kukanda bhora mabheyaringi: kuve nemakeji maviri ane mabhora pakati peiyo yepakati shaft washer uye maviri houding ma washer ane flat zvigaro zvigaro. Iyo shaft washer ine mijaho kunhivi mbiri uye yakatarwa pamagazini. Mabheyaringi anokwanisa kutakura chete axial masimba munzira mbiri.
Pashure: Clutch Regedza Kubereka